ကောင်းကင်ပြာနဲ့ အူးသန့်စင် – Detoxing | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကောင်းကင်ပြာနဲ့ အူးသန့်စင် – Detoxing
ကောင်းကင်ပြာနဲ့ အူးသန့်စင် – Detoxing
Posted by ဇီဇီ on Apr 22, 2015 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, How To.., Ideas & Plans, Society & Lifestyle | 48 comments
ကင်းကောင်လေးနဲ့ စကားစပ်မိရင်းက အူသန့်စင်နည်း အကြောင်းရောက်သွားတာနဲ့……
ခုတလော အူဆေးတယ်၊ အစာအိမ်ဆေးတယ် ဆိုတာ ခေတ်စားနေလို့ နည်းနည်းပွါးချင်ပါတယ်။
စလုံးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က Detoxing စ ခေတ်စားတော့ ကလင်းနစ်အမျိုးမျိုးကနေ ပြီး သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းတွေ ကိုယ်ပိုင်ဆေးတွေ ကိုယ်ပိုင် လမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့ အပြိုင်သဘောမျိုးကို လုပ်ကြတာပါ။
အဲဒီကနေ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဝိတ်ချနည်းတွေ ဖြစ်သွားတုန်းတော့ မသိဘူးးး
ဆိုတော့၊ ၂ ပိုင်းခွဲပြောချင်ပါတယ်။
၁) Detoxing (ဒီ ပို့(စ) မှာ ပြောပါ့မယ်)
၂) ဝိတ်ချခြင်းး (နောက် ကြုံမှပဲ)
Detoxing ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျနော်တို့က အစားစုံစား သတ္တဝါ/လူတွေမို့ စားလိုက်တဲ့ အစားအစာထဲက အဆိပ်အတောက် ဓာတ်တွေ ဟာ အူ၊ အစာအိမ်၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ သွေး စတာတွေထဲမှာ ကျန်နေတတ်ပါတယ်။
အဲဒီ အဆိပ်အတောက်ဓာတ်ကို လျှော့ချ၊ဖယ်ရှားတာမို့ ဒီတောက်ဆင်း လို့ ခေါ်တာပါ…
Detoxing လုပ်လို့ ရနိုင်တဲ့ အကျိုးတွေက…
၁) အစားမစားတာနဲ့ တစ်ပြိုက်နက် ကျနော်တို့ ကလီစာ တော်တော်များများ အနားရပါတယ်။
၂) အလုပ်အများဆုံး အသည်းအနေနဲ့လည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်ကို ဖယ်ရှားရာမှာ ပိုမြန်ဆန်ပါတယ်။
၃) အူ၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသားအရည် သန့်ရှင်းဖို့လည်း အထောက်အကူပေးပါတယ်။
၅) အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားတွေ စားတဲ့အခါ အာဟာရဓာတ်ကို စုပ်ယူမှု ပိုအားကောင်းပါသတဲ့။
၂) သွေးအားနည်း ရောဂါ ရှိသူများ
၃) အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်း ရောဂါရှိသူတွေ မျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူးး
Detoxing များ စတော့ မယ် ဆိုရင် ဘာတွေ အရင် လုပ်ရမလဲ???
၂ ရက်လောက် ….
၂) စီးကရက် (သောက်တတ်ရင်)
၃) ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ နို့
၄) သကြား၊ ဆား၊ အချိုကဲ အစားအစာ
၄) ရယ်ဒီမိတ် အစားအစာ
၅) ကယ်မိကယ် ထိတွေ့မှု အဲဒါတွေ အကုန်ရှောင်ရပါတယ်။
Detox diets ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ???
၁) အသီးအနှံ နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားခြင်း
၂) ကြိတ်ဖျော်ထားတဲ့ အနှစ် စားသုံးသောက်သုံးခြင်း
၄) သကြားဓာတ်လျှော့ချတဲ့ ဆေးသောက်သုံးခြင်း
၅) ဒီတောက်ဆင်း အတွက် အထူးဖော်စပ်ထားတဲ့ ဆေး သောက်ခြင်း
၄) နဲ့ ၅) က ဆေး မို့လို့ ကျနော် ဒီအပိုင်းမှာ မပြောတော့ပါဘူးးး
အလွယ်ဆုံးပဲ၊ ကျနော်က အချိန်ခိုး၊ လူပျင်းမို့…. :mrgreenn:
မနက်စာ – သင်္ဘောသီး၊ ထောပတ်သီး လောက် ကို စိတ်ထားပြီးသား ဝယ်စားတယ်။
နေ့လည် – ဆလပ်ရွက်၊ ဂေါ်ဖီရွက်တို့ ခရမ်းချဉ်သီးသေးtသေးလေးတွေကို ကို သံလွင်ဆီနဲ့ သုတ်ပြီး အဆီမပါတဲ့ နပ် တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွဲစားလိုက်တယ်။
ညဘက် – ငှက်ပျောသီး၊ ပန်းသီး စားချင်စား၊ မစားရင် အသီးအရွက် ရေလုံပြုတ်စားတယ်။ အာလူပြုတ်စားတယ်၊ ကန်စွန်းဥပြုတ်စားတယ်။
ဆာတိုင်း ရေပဲ သောက်တယ်။
ထမင်းစားချင်ရင် ဆန်အညို ကိုချက်စားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းက ထမင်းမလွတ်ပဲ ဆီလွတ်တဲ့ အပြုတ်နည်းနဲ့ စားလို့ရပါတယ်။
မှတ်မိလားမသိ၊ အာတီဒုံ ပြောဖူးတဲ့ အသီးအရွက် ကြိပ်ရည်။ အဲဒါ အကောင်းဆုံးပါပဲ။။
Anti-Oxidant အစုံရအောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းစိမ်းကြမ်းကြမ်းများကို အရည်ကြိတ်၍ သောက်ရန်။
(က) ပိုးသတ်ဆေး+ပိုးမွှားများ ကုန်စင်အောင် ရေ ၁ ဂါလံ တွင် ရှာလကာရည် ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း ရော၍ ၅မိနစ် စိမ်ပါ။ ပြီးမှရေစင်အောင်ဆေး၍ ၁မိနစ် ပြုတ် (သို့) ပေါင်းပါ။
(ခ) အားကောင်းသော Blender နှင့် ကြိတ်ချေ၍ ရေအနည်းငယ် ရောပါ။
(ဂ) သောက်မကုန်လျှင် ရေခဲသေတ္တာထဲ 1-2ရက်ထားနိုင်သည်။
(ဃ) ထည့်နိုင်သောအရွက်များ –
 ကိုက်လန် ၊ ဟင်းနုနွယ် ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ရဲယိုရွက် ၊ မယ်ဇလီရွက် ၊ သင်္ဘောရွက် ၊ ကန်ဇွန်းရွက် ၊ မုန်ညင်း ၊ မြင်းခွာရွက် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ။(နှစ်သက်ရာ)
 တရုတ်နံနံ(သွေးတိုးရောဂါတွက် ကောင်းသည်) ။
 ပန်းဂေါ်ဖီ(ဖြူ) ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်(ခရမ်းရောင်) ။(ကင်ဆာကာကွယ်သည်)
 သောက်ကောင်းရန် ပန်းသီး၊သံပုရာသီးစသည့် မချိုလွန်းသော အသီးများထည့်နိုင်ပါသည်။
(င) တခါကြိတ်လျှင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဆယ်မျိုးခန့်ပါနိုင်လျှင် ကောင်းပါသည်။ အမယ်စုံလေ Anti Oxidant များလေဖြစ်သည်။
(စ) အစာစားပြီးမှသောက်ပါ။ (သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကျစေနိုင်သောကြောင့်)
(ဆ) တနေ့ ၁ ကြိမ် နေ့စဉ်သောက်ပါ။
နောက် ဥကျောက် ရဲ့ နည်း လည်းရှိသေးတယ်။
ပန်ကရိယဆေး ဖျော်ရည် (အရက်သေစာသောက်စားသူတို့ သောက်သုံးရန်သင့်တော်)
နုတ်နုတ်စဉ်း ဗလန်ဒါနဲ့ကြိတ် ၊
ပိတ်စိမ်းပါးနဲ့ အရည်စစ် ၊
သံပုရာသီး တစ်လုံး (သေးရင် ၂လုံး) အရည်ညှစ်ပြီးထည့် ။
ဂလုလိုက်ရင် ပန်ခရိယက အစာဟောင်းတွေရဲ့ အဆိပ်တွေ ပြေပြီး ဝိတ်ကျပါတယ်…
အနည်းဆုံး သစ်သီး ၃ မျိုးလောက်ကို တစ်နပ်စာမှာ ဖျော်ရည်ဖျော်သောက်တာပါ။
ကျနော်ကတော့ ဘာ သစ်သီးဖျော်ဖျော် သံပုရာရည်ညှစ်သောက်တာပဲ။
ဒီ အထက်ပါ ၃ နည်းက ထမင်းအလွတ်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ စားတဲ့ထဲမှာ ဆီရှောင်၊ ဆားရှောင်၊ သကြားရှောင်၊ ရယ်ဒီမိတ် အစားစာရှောင်ပြီး အော်ဂစ်နစ် အစားအသောက်တွေကို ဦးစားပေးထားတဲ့နည်းတွေပါ။
ဟုတ်ကဲ့။ ဒီ နည်းတွေ အပြင် ခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတာကတော့ သစ်သီးစိမ်ရေတို့ သံပုရာသီးစိမ်ရည်တို့ ကို အချိုရည် အစား ရေအစားသောက်သုံးပေးတာမျိုးပါ။
ဖန်ခွက်၊ ရေခရား၊ အ၀ကျယ်ပုလင်းပု တစ်ခုခုထဲကို သောက်ရေထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် သခွါးသီးကွင်း၊ သံပယိုသီးကွင်းနှင့် ပူစီနံရွက်တို့ကို ရေနှင့်ချိန်ဆ၍ အနေတော်ထည့်ပြီး (၅)နာရီခန့် ရေခဲသေတ္ထာထဲ ထည့်ထားပြီး သောက်ပါ။
ဒီနည်းတွေထဲမှ မိမိနှင့်အဆင်ပြေနိုင်မည့် နည်းတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်၍ လုပ်နိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံး ၆ နာရီမှ ၁၀ ခန့်အထိ စိမ်ထားပြီးလျှင် စတင်သောက်သုံးနိုင်ပါပြီ။ ရေနည်းသွားလျှင် ပြန်ဖြည့်ထားနိုင်ပါသည်။
စိမ်ထားသည့် ရေများကို ၂ရက်(၄၈) နာရီအတွင်း ကုန်အောင် သောက်နိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
ဒီထက် ပိုကြာသွားလျှင် မလတ်ဆတ်တော့ပါဘူး။ ပိုမိုထိရောက်စေလိုလျှင် အလုပ်နားသည့်ရက်မှာ ထမင်းဟင်းများကို လုံးဝမစားပဲ Detox Water ကိုသာ တစ်နေ့လုံး သောက်ပေးပါ။
စိမ်ထားသော အသီးအနှံနှင့် အခြားဖျော်ရည်များကိုလည်း သောက်ပေးနိုင်ပါသည်။
Detoxing လုပ်တဲ့ အချိန်ကာလကတော့…
၁) တစ်သက်လုံး ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နေတတ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဟိ :mrgreenn:
၂) မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ့် အကြိုက် အဆီအဆိမ့် အအီအအိမ့်မစားပဲ နေနိုင်သလောက် ၇ ရက် ၁၀ ရက် ၁၄ ရက် စသည်ဖြင့်ပေါ့။
တစ်ရက်တည်း လုပ်ချင်လည်း နည်းရှိပါတယ်။
“ဆေးစားစရာ မလိုပဲ (အူဆေးနည်း)”
ချစ်စွာသော မိတ်ဆွေတို့ရေ ဗိုက်ပူ အလှ ပျက်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြ ပါသလားရှင်။
ဆေးသောက်စရာ မလိုပဲ အရမ်းကို ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းလေး တစ်ခု ရှိပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ ပင်ပန်း ခံရပါမယ်။
အနည်းငယ် ခက်ခဲတဲ့ အတွက် အစာအိမ်ရောဂါ ရှိသူ၊ သွေးအားနည်း ရောဂါ ရှိသူတွေ အတွက်တော့ မစမ်းသပ်ကြဖို့ မှာကြားလို ပါတယ်ရှင့်။
လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းလေး ကတော့ ဒီလိုပါ။
၁။ ၂၄ နာရီလုံး ရေ တစ်မျိုးထဲသာ သောက်ရပါမယ်။ (ဥပမာ – ယနေ့ မနက် ၇ နာရီမှ စမည်ဆိုလျှင် နောက်နေ့ မနက် ၇ နာရီထိ)။
၂။ ၂၄ နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး ရေ ငါးလီတာ ခန့်ထိ ဝင်အောင် သောက်ပေးရ ပါမယ်။
၃။ မည်သည့် အစားအစာ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ အချိုရည်မှ မသောက်ရပါ။
၄။ ၂၄ နာရီ ပြည့်သည်နှင့် ရေကြက်သည်းနွေး တစ်လီတာကို ဆား လက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်း ထည့်မွှေပြီး တစ်ထိုင်တည်း ကုန်အောင် သောက်ပေးရ ပါမည်။
၅။ ထို့နောက် အိပ်ယာထက်တွင် ညာဘက်သို့ စောင်းကာ နာရီဝက်ခန့် လဲလျောင်း နားနေ ရပါမယ်။
၆။ ဝမ်းသွား လိုလာလျှင် ထ သွားလိုက်ပါ။
၇။ ထိုသွားသော ဝမ်းသည် အလွန် နံဟောင်သော ဝမ်း၊ ရံခါ အမည်း အညစ်အကြေး များပါ တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။
၈။ ၄ ခါ ၅ ခါခန့် သွားပြီး အရည် ကျဲလာလျင် ဆန်ပြုတ် (သို့) သစ်သီးဖျော်ရည် တစ်ခွက်သောက်ကာ ခဏ ပြန်နားနေ လိုက်ပါ။
၉။ ထို့နောက် ထိုနေ့ တစ်နေကုန် အပူအစပ်၊ နို့နှင့် နို့ထွက် အစားအစာ များနှင့် ready made food များကို ရှောင်ကြဉ်ပေး ရပါမည်။
နောက်ရက်များတွင် နှစ်သက်ရာ ပြန်လည် စားသောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ready made food များကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကျဉ် ရပါမည်။
နို့နှင့် နို့ထွက် အစားစာ များကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကျဉ် ရပါမည်။
သစ်သီးဝလံ များကို ပိုမို စားသုံးရ ပါမည်။ ညဘက်တွင် အသီးနှံ တမျိုးမျိုး ကို ညစာ အစားထိုး ဖြည့်စွက် စားသုံးနိုင်ပါသည်။
ယင်းနည်းသည် မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ မကွယ်လွန်မီ တစ်လ တစ်ခါ ပြုလုပ်နေကြ နည်းလမ်းဖြစ်သည် ဟု သိရပါသည်။
မိမိတို့ နေ့စဉ် စားသုံးခဲ့သော အစားအစာများ အကြော်ဆီများ ဆီဦးထောပတ် များအတွက် အူသည် မည်သည့် အခါမှ မဆေးကြော ခဲ့ရပါ။
ထို့ကြောင့် ဗီလိုင်ဟု ခေါ်သော အမြှေးလေးများမှာ ငါးကန်များ ရေညှိ တက်သကဲ့သို့ အညှိလေးများ တက်နေပါသည်။
ထိုသည်ကို ဆားရေနွေးလေး များဖြင့် ဆေးကြော သန့်စင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ ဆေးကြော လိုက်ခြင်းဖြင့် နောင်အခါ စားသောက်သော အသီးအနှံ အစားအစာ များမှ အာဟာရများ ပိုမို စုပ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ြပီး ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော ကိုယ်ခန္ဒာကို ပိုင်ဆိုင်လာမည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အူမဆေးမီ မိမိ ဗိုက်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် တိုင်းထားပါ။ အူဆေးပြီး နောက်ရက် ထပ်တိုင်းကြည့်ပါ။ သိသိသာသာ ဗိုက်လေး ချပ်ရပ် လှပသွားမည်ကို တွေ့ရပါမည်။
သတိပြုရန်မှာ။ ။ အူဆေး ထားပြီးနောက် ညစာအဖြစ် နို့နှင့် နို့ထွက် အစားစာများ စားသုံးခြင်း၊ ညစာ အလွန်အမင်း စားသုံးခြင်းများ သတိပြု ရှောင်ကြဉ်စေ လိုပါသည်ရှင်။ အသီးအနှံ ဖြည့်စွက် စားသုံးခြင်း အလေ့အထကို ပြုလုပ်စေလို ပါသည်ရှင့်။
နောက်ဆုံးမှ ကျနော် လုပ်ဖူးတဲ့ နည်းပါ။
သူများတွေ ၁၄ ရက်မို့ ကိုယ်လည်း အားကျမခံ ၁၄ ရက် လိုက်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ ငရဲကျတဲ့ နေ့တွေပေါ့လေ။
အကြောင်းသိတွေကတော့ ဖြစ်ပါ့မလား ပူ တယ်။ ကိုယ် ဘယ်လောက် အစားကြိုက်တာ သိသကိုးးးး
– ၁၄ ရက်မစခင် ၂ ရက်က အပေါ်က ပြောတဲ့ ရှောင်ရန်တွေ အရင် ရှောင်ရပါတယ်။ အူကို အရင်ကျင့်ရတာပါ။
– ၁၄ ရက် စ ပြီ ဆိုတာနဲ့ အဖတ်ဟူ၍ ဘာမှ စားလို့ မရတော့ပါ။
– ဆာတိုင်းသောက်ရမဲ့ အရည်ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။
၂ နာရီ အတွင်းကို ရေ ၁ လီတာ နှုံး
ရေတစ်လီတာထဲကို မေပယ်ဆီရပ် (Maple Syrup) ၄ ဇွန်း၊ သံပုယို တစ်လုံး အရည်ညှစ်ထည့်ထားရပါတယ်၊
ငရုတ်ကောင်းလို အမှုန့်ကလည်း ထည့်ထားရပါတယ်။ ဆာတိုင်းသောက်၊ ၂ နာရီ အတွင်းကုန်အောင်သောက်၊
– ၃ ရက်လောက်ကြာရင် လူက လျှာကထုံပြီး ဘာအရသာမှမရတော့သလိုပါပဲ။
– အဲ ၃ ရက်လောက်ထိက အိမ်သာတက်လို့ရသေးတယ်။
– ၃ ရက်နောက်ပိုင်းက ဘာမှ မစားတဲ့ အတွက် သွားစရာမရှိ။
– အဲဒီ အချိန် ကလင်းနစ်ကပေးတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်ကို ရေနွေးနဲ့ ည အိပ်ရာဝင် သောက်ရပါတယ်။
– ဒါမှ အူနံရံမှာ ကျန်နေတဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေ အစာမရှိချိန်ဆေးချသလို ကွာကျတာမို့ ဝမ်း နံနံသွားပါတယ်။
– အဲလိုနဲ့ ၁၄ ရက် ပြည့်ပြီး ချိန်မှာ ဆန်ပြုတ်က စစားရပါတယ်။
– အစာပြင်းပြင်း လုံးဝ စားလို့ မရသေးပဲ (အမှန်တော့ စားချင်စိတ်လည်းပျောက်ပြီး) နည်းနည်းချင်းလောက်ပဲ အဆီမပါပဲ စစားရတာပါ။
– ၂ ပတ် လုံးဝ အဖတ်မစားတဲ့ အပြင် ရေများများသောက်ပြီး အချဉ်ဓာတ်ပဲ ဝင်တာမို့ မပိန် ခံနိုင်ရိုးလားး??
– ၂ ပတ်အတွင်း ၄ ကေဂျီလောက် ကျပါတယ်။
– အဲ !!!! အစားမဖြတ်နိုင်သူ ကေဇီ ပြန်အစားမှာ ၆ ကေဂျီလောက် ပြန်တက်တာတော့ မပြောတော့ပါဘူးးး :mrgreenn:
အူဆေးပြီးရင် အစားအသောက်ဓာတ်ကို အာဟာရကို ပိုစုပ်ယူတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်နော့။
ဆိုတော့ ဒီလောက် ဆို ကောင်းကင်လေး ရွေးချယ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
သူ့ အတွက် ရေးတာကိုးးး
ဆိုးတာက အဲဒါကို ဒီထဲ ထည့်ရမလား မထည့်ရဘူးလား မ​သေချာဘူး
(သူက​တော့ သောက်​တဲ့လစ်​မစ် များလာရင် လုပ်​တာပဲ :loll: )
ဟုတ်​တယ်​ ။ ဂဂ နာလည်းလုပ်​ဖူးတယ်​ ။ အရက်​ပြင်း ​သောက်​တာများသွားလို့ ကိုယ်​လက်​မအီမလည်​ဖြစ်​​နေရင်​ စီး​တော်​ယာဉ်​ စက်​ဘီး​လေးထုတ်​ ၂မိုင်​​လောက်​ရှိတဲ့ ရွာသစ်​ဆိုတဲ့ ရွာက​လေးရဲ့ အပြင်​ကထန်းတဲ​လေးကို ချီတက်​တာပဲ ။ ၀မ်းဘယ်​​လောက်​ချုပ်​​နေပါ​စေ ပင်​ကျ​ရေ ​လေး အုန်းမှုတ်​နဲ့ သုံးမှုတ်​​လောက်​​သောက်​ပြီးရင်​ ခြုံတိုးရ​တော့တာပဲ ။ ထန်း​ရေ တစ်​မြူ​လောက်​​သောက်​ပြီး ခြုံသုံးခါ​လောက်​တိုးပြီးရင်​ ၀မ်းထဲက အရိအချွဲ ကုန်​ဘီ ။ ထန်းတဲနဲ့ မနီးမ​ဝေးက “န၀င်း” ​ချောင်းထဲ အ​ခြေအ​နေကြည့်​ပြီး တိုင်းရင်းသူ​တွေလို ဆင်းစိမ်​လိုက်​ ။ အမူးလဲ​ပြေ လူလည်း​ပေါ့ပါး ။ ​နောက်​​နေ့အတွက်​ အင်​အား​တွေဘယ်​က ရလာမှန်းကိုမသိ ။ ကုန်​လွန်​ခဲ့တဲ့ နှစ်​နှစ်​ဆယ်​ ပြန်​လွမ်းပါ၏ ။
(အူဆေးပြီးရင် အစားအသောက်ဓာတ်ကို အာဟာရကို ပိုစုပ်ယူတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်နော့။)
၁၄ရက်မပြောနဲ့ ၁ရက်တောင် မလွယ်။
ပြီးရင်လည်း အာဟာရကို ပိုစုပ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ကာ ပင်ပန်းရကျိုးမနပ်ဘူး။
အူဆေးတာနဲ့ ပိန်ဖို့လုပ်တာနဲ့ ရောမစိုးလို့။
မပြင်းထန်တဲ့ နည်းတစ်နည်းနည်းနဲ့ ပေါ့။
ကျနော်တို့က အစားသမား ဆိုတော့ ပိုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ကျနော့ နည်းက ပြင်းထန်လွန်းလို့ ပိန်ကျသွားတာမို့ ရေးထားတာပါ။
Post တင်ထားပြီမှန်းသိကတည်းက လိုင်းပေါ်တက်နေတာ။ ခုမှ ရွာဝင်လို့ ရတယ်။
ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး ဟိုဟာလေးကောင်းနိုး ဒီနည်းလေးလဲ မဆိုးဘူးလို့တွေးမိတယ်။
၁၄ရက်နည်းကရော ရုံးတစ်ဖက်နဲ့ဆို အဆင်ပြေနိုင်လားဟင်???
Side Effect အနေနဲ့ ဘာတွေခံစားရလဲဟင် မချွိ?
အူဆေးပြီးတော့ရော လူက ဘယ်လိုနေလဲ?
သစ်သီးစိတ်ရေ သောက်တာလဲ စိတ်ဝင်စားမိတယ်
ဗဟုသုတရတဲ့ ဒီပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ မချွိရေ
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းရဲ့ နည်းကိုလဲ သိချင်မိသေး
ကြွေလွင့် ပန်း says:
၁၄ ရက်နည်းကတော့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ဘိုထိုင်ကို ဖက်ထားပြီးနေနိုင်ရင်တော့ အဆင်ပြေပါမယ် ကို ကင်းကောင်ပြာရော။
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းကတော့ တစ်ချိန်က တရုတ်သိုင်းလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ နန်းတွင်းသမားတော်ကြီး၊ ဘုရင်အဆက်ဆက် (ဟန်မင်းဆက်တစ်လျှောက် အသုံးပြုခဲ့တဲ့) သက်တော်ရှည် တရုတ်သမားတော်ကြီးရဲ့ နန်းတွင်းဆေးဖြစ်လေတော့ ရှောင်းဥဒွေ လို့ မြန်မာလို အသံထွက်ရမယ့် ၀ုန်းနှက်စမ်း တစ်ဖြစ်လဲ ထားရည်ခမ်း ဆိုတဲ့ သစ်ဥသစ်ဖုတွေနဲ့ရောလို့မွှေပြီးတော့ သဘာဝနည်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ရလာမယ့် ဆေးပေါင်းတစ်မျိုးသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
တစ်လအတွင်းမှာ ၁၄ ကီလိုကျဖို့ အာမခံတော့ 43 ကီလိုကနေ – 14 ဆိုတော့ 63 ပေါင်။
မဖြစ်သင့်ဘူး၊ မဖြစ်သင့်ဘူး။ မြှောက်ပေးတိုင်း မလုပ်သင့်ဘူး။ သူများတွေ Overweight တွေ ဖြစ်ပလေ့စေ။ ဆင်ပိန်တော့ ကျွဲလောက်ကျန်သေးတာ။
အဲ ဒီ မမဂျီး ၁၄ ရက်ကတော့ အူဆေးတာ မကတော့ဘူး ကင်းကောင်လေးးး
နုံးချိပြီး နေလို့ မကောင်းဘူးးး
လုပ်ပြီး အသားကြည်သွားတာရယ် ပိန်သွားတာရယ်ပဲ ရှိတယ်။
ကောင်းကောင်လေး က အဲလောက်မဝတော့ မစမ်းနဲ့။
ပုံမှန် ဆေးနည်းလောက်ပဲ လုပ်။
ခုလို သိ ရ တာ ကောင်းလိုက်တာ
လုလု ကအစာအိမ်မကောင်းတော့ အူဆေးလို့ မရဘူးပေါ့ နော်
မလုပ်တာ ကောင်းမှာ လုလုလေးး
.လောလောဆယ်တော့ ပီဒီအက် ပြောင်းပြီးသိမ်းထားလိုက်တယ်…ဘယ်တော့လုပ်ဖြစ်မယ်မသိသေး :))
လွယ်တာလေး အရင် လုပ်လေ Mike Mike..
စိတ်ဝင်စားတယ်။ သောက်ကောင်းတယ် ပြောတာလေးကို လက်တွေ့ ကတော့ မသေချာ။ တရိပိရိပ်နဲ့ အဆီတွေတက် ပေါင် ၁၄၀ နားနီးနေပြီ။ ချစ်ချစ်ကလည်း ရာဇသံပေးနေပြီ ဒီ ထက် ပိုဝလာရင် မကြိုက်ဖူးနော်တဲ့။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက နေပြည်တော် ရောက်ရင် ၀ိတ်ချမယ် စိတ်ကူး။ အခု နေပြည်တော်ရောက်တော့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှပဲ လုပ်ပါတော့မယ် ထပ်တွေး
ဒါ ဝိတ်ချတဲ့ ပို့(စ) ဟုတ်သေးဘူးးး
အူဆေးတာ ရက်ကြာရင် ဝိတ်ကျတယ်လို့ ပြောတာ။
နာ့ အမ မဝ ပါဘူးရယ်
ပျင်းကလဲ ပျင်း စိတ်ကလဲ မနိုင် ဆိုတော့ကာ ၂၄နာရီ နဲ့ ပတ်ကြမ်းတိုက်တဲ့ နည်းပဲ လုပ်ကြည့်မလား စဉ်းစားတယ်။
weekends မှာ ၂၄နာရီစာ အချိန် ရ အောင် ရှာလိုက်ဦးမယ်ကွယ်….
အဲဒါ ကို မစမ်းရသေးဘူးးး
အဲဒီ ၂၄ နာရီ ရုပ်ရှင်ပဲ ကြည့်နေရမလား မသိဘူးးး
ဟယ်ရီပေါ်တာ မာရသွန်မှ ထင်တယ်။
TV Series အသစ် season ၃ ၄ ခု လောက် ရှာထားလိုက်ဦးမယ်။
အဘနီ ပြောမှပဲ ထန်းတောပြေးရမလိုဖြစ်နေပြီ :loll:
ဆရာသော်တာဆွေရဲ့ ကျွန်တော့်ဘဝဇာတ်ကြောင်းထဲက မ.လာတာ
ပို့စ်နဲ့ ဆိုင်ရင် ဆိုင်တယ်မှတ် (မဆိုင်လည်း ဂရုမစိုက်ပါဘူး တင်မှာပဲ :mrgreenn: )
ဆရာကြီးသည် အရက်သောက်သူဖြစ်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံ ရေးသားခဲ့ဘူးသည်။
သို့သော် ဆရာကြီးသည် ကျွန်တော်သိခဲ့သမျှ အသက်၈၀-ကျော်သည်တိုင်အောင် “အရက်ကို
လူကသောက်သည်” ဆိုသော အဆင့်မှာဘဲ အမြဲတမ်းရှိခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသည် အရက်ကို မူးချင်၍
သောက်သည်မဟုတ်၊ စားကောင်းအိပ်ကောင်းအောင်သာ သောက်သူဖြစ်သည်။
ဆရာကြီးသောက်နည်းမှာ အရက်ကို ဘယ်တော့မှအစားနှင့် ခွာမသောက်ပေ။ ထမင်း
စားခါနီးမှ အရက်ကိုသောက်၏။ သောက်ပြီးရင်ပူ၍ ၀မ်းဗိုက်က အစာကိုတောင်းလာသောအခါ
ထမင်းကို အားရပါးရ စားပစ်လိုက်လေသည်။
ကျွန်တော်သည် ဤနည်းအတိုင်းဘဲ ပြုကျင့်ခဲ့ပါလျက် တနေ့ထက်တနေ့၊ တလက်ထက်
တလ၊ အရက်တွေ ပိုပိုသောက်သောက်လာမိ၏။ ဥပမာဆိုအံ့။ ပထမ၌ တစိတ်နှင့် ထမင်းမြိန်၏။
အိပ်ပျော်၏။ နောက်တစတစနှင့် တပိုင်းရောက်လာ၏။ ထို့နောက်တပုလင်းထိသွား၏။
မသောက်ရလျှင် လေတပျို့ပျို့ဖြစ်လာ၏။ ထမင်းစားမ၀င်၊ အိပ်မပျော်ချင်တော့။ ယင်းသည် အရက်က
ဆရာကြီးသည် ဤအဆင့်ကို မရောက်ပေ၊ နေ့တိုင်းအရက်ကို မသောက်၍လား၊
သောက်လိုက်သမှ၊ ဆရာကြီးအရက်မသောက်ဖဲ ထမင်းစားသောအခါဟူ၍မရှိ။ ကျွန်တော်နှင့်
နှစ်ရှည်လများအတူနေခဲ့၊ စားခဲ့၊ သောက်ခဲ့ဘူးသည်။
သို့သော်ဆရာကြီး၏ ထူးခြားချက် လေ့ကျင့်မှုတရပ် ရှိသည်မှာ တခါတခါ၌ သူ့ကိုယ်သူ
ချွန်းအုပ်၍ ခြိုးခြံမှုဖြစ်၏။ သူသည်ကျွန်တော်တို့လိုဘဲပေါ့။ အများတကာ အရက်သမားတွေသိ
ကြသည့်အတိုင်း တစတစ အရက်ကလေးပို သောက်လာ၊ ပိုသောက်မှလဲ အာသီသပြေ၍ ထမင်းမြိန်၊
အရက်နည်းနေရင်ဘဲ စိတ်ထဲတယ် မကြည်ချင်တော့။
ဤအချိန်ရောက်လာသောအခါ၌ ဆရာကြီးသည် သူ့တသက်တာ မှတ်တမ်းထဲတွင်
ရေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ထမင်းဟင်း စားကောင်းချင်လို့သာ အရက်သောက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်
သည်အခါ၌ ဆရာကြီးကတော် ဒေါ်ကြီးစိုးက ထမင်းဟင်းတွေ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာမချက်တော့။
ဗူးသီး၊ ဂေါ်ဖီရွက်၊ မုံလာထုပ်၊ မုံလာဥ၊ ပဲသီး စသည်တွေပြုတ်ပြီခင်ဗျာ။ ဒီတော့ ဆရာကြီးသည်
အရက်လဲ လုံးဝမသောက်တော့ဘဲ၊ ဤအသီးအရွက်ပြုတ်တွေကိုဘဲ ငန်ပြာရည်နှင့် တို့စားလေတော့၏။
ထမင်းဟင်းစားနေကျသူသည် ဤမျှနှင့်တင်းမတိမ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဆရာကြီးသည် သူ့ဝမ်းဗိုက်ဆာလာလျှင် ငှက်ပျောသီးစား၏။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်၏။ လက်ဖက်စား၏။
ယင်းသို့လျှင် သူသီတင်းတပတ်မျှ မိမိကိုယ်မိမိ ခြိုးခြံချုပ်တည်းမှု ပြုပြီးတော့မှ မူလကလို
ဘဲ အရက်ပြန်သောက်၏။ ထမင်းစားဟင်းပြန်စား၏။
စင်စစ်တော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်၏အာဟာရဓါတ်ခံကို ပြောင်းပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအခါမှာ
သူသည် အရက်စသောက်တတ်ခါစ ကလေးကဲ့သို့ အရက်အနည်းငယ်မျှလေးနှင့် ထွေပြီးထမင်း
“ဟေ့ အဲလိုမသောက်ဖဲ၊ ထမင်းမစားဘဲခြိုးခြံနေပြီးတော့မှ ပြန်ပြီး သောက်တာစားတာ ဟာ
ဘယ်လောက် အရသာရှိသလဲ။ အရက်လဲဘဲ ပြန်ပြီးအသောက်နဲသွားတယ်ကွ၊ ခန္ဓာကိုယ်လဲ
သန့်စင်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်လဲ ကောင်းတယ်၊ မင်း ငါ့လိုလုပ်ကြည့်စမ်းကွာ”ဟု တိုက်တွန်း
သို့သော် ကျွန်တော်သည် ဆရာကောင်းတပည့်၊ ပန်းကောင်းမပန်ခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့်
အရက်သူရာကြောတွင် တော်တော်နစ်မျောခဲ့ဘူးပါ၏။ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေကိုသာလျှင် ဆရာကြီးလို
အရက်သမားများသာမဟုတ်။ ငွေကြေးချမ်းသာ၍ ထမင်းကောင်း ဟင်းကောင်းတွေနှင့်
နေ့စဉ် စားနေရပါလျက် ကြာတော့ ငြီးငွေ့အီလည်လာသောအခါ၌ ဆရာကြီးနည်း ခြိုးခြံပြီး
အစားပြောင်းခြင်းကို ပြုကြည့်သင့်ပါ၏။ မော်တော်ကားစကားနှင့် ပြောရသော် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ကို
အဲဒါ အသည်းရော ကျောက်ကပ်ရော သန့်သတဲ့။
မနေ့ကတော့ လုပ်သောက်ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးနာရီမစိမ်းထားမိဘူး။ ဒီနေ့ထပ်ပြီး အချိန်အတိအကျ စိမ်ပြီး သောက်ကြည့်ဦးမယ်။ ရေကတော့ မွှေးမွှေးလေးဖြစ်ပီး သောက်လို့တော့ အတော်ကောင်းတယ်။ သခွားသီးအစား ပန်းသီးထည့်မိလိုက်တယ်။ ဒီနေ့တော့ သခွားသီးထည့်ပြီး သောက်မယ်။ :D
ပလင့်ထုတ်ထားဒယ်အေ… သတ်တိရှိဒဲ့ တစ်နေ့ လုပ်ကျိဒါပေါ့
တစ်ရက် ဟာ ကို အရင် စမ်းကြည့်လေ ။
အခုတလော ရာသီဥတုက အရမ်းပူတော့ ထမင်းမစားချင်ဘူး.. အဲဒါနဲ့ အရွက်တွေချည်းကြော်စားဖြစ်နေတာ ၂ ရက်ရှိပြီ (ဆီနည်းနည်းလေးနဲ့ အရည်လေးနဲ့ ချက်တာပေါ့နော်..) ဝမ်းလည်း မှန်လာတယ်…
မမဂျီးရဲ့ ပထမဆုံး (၃) နည်းကိုတော့ စိတ်ဝင်စားသား.. လုပ်ကြည့်အူးမယ်.. အနော်က လူပုရတဲ့အထဲ ဝလာတော့ မြန်မာအကျီဝတ်ရတာ အတော်အဆင်မပြေတော့ဘူး..
၁၄ ရက်ဘာမှ မစားပဲ ဆေးလို့ပိန်သွားတာလို့။
ဒီ ပို့(စ) က ဝိတ်ချနည်းတွေ ဟုတ်ဘူးနော်
နောက် ပို့(စ) ကို ဆက်ဆက် ဝိတ်ချဖို့ ရေးပေးမယ်နော်
တစ်​ရက်​​နည်း​တော့စမ်းမှရယ်​… ၁၄ရက်​က​တော့.. ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို…သနားတယ်​.. :cryy:
ဒါမှ မဟုတ်လည်း ပုံမှန် တစ်နပ်စာကို အသီးအနှံနဲ့ အသီးအရွက် အစားထိုးလည်း ရတာပဲ။
ဆီ/ဆား ဆန် ရယ်ဒီမိတ်လျှော့ပေါ့။
အစာ မရှိလို့ ပိန်မယ်ဆို နေ့တိုင်း ဥပုသ်စောင့် လိုက်ရင်ပြီးရောလေ။ ကုသိုလ်လဲပါ ဝမ်းလဲဟာ ပေါ့။
တစ်ချို့ ဟောလီဝုဒ် မင်းသမီး တွေ စားပြီး လက်ထိုးအန်ကြတယ် ကြားဖူးတယ်။
. အတည်ပြောရရင် အဲဒီ Diet ရဲ့ ဟာကွက် တွေထဲ မှာ အဟာရ မပြည့်ဝမှု က ထိပ်ဆုံးက ပါပါတယ်။
. ကိုယ့် စတိဗ် ရဲ့ Diet က ဥနီ တွေချည်း စားခဲ့တာ။ အဲဒီ ကနေ ဒုက္ခရောက်တော့တာဘဲ။ :-(
ခု သူတို့က ပိုလည်သေး အရီးရေ။
ကိုယ့်ကို ဒိုင်းယက်ပလန် လာပြပြီဆိုရင် တစ်နေ့တာ အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်က ဘယ်လောက်၊
အဲဒီလိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တွေ အတွက် ဒီ ပလန်က ဘယ်အမှုန့်ကို ဘယ်လိုသောက်ဆိုတာ တခါတည်းရှင်းပြတယ်။
ကျနော်ကတော့ သဘာဝဒိုင်းယက် ရယ် သဘာဝ ဒီတောက်ဆင်းရယ်ကို ပိုယုံတယ်။
ဆေးရဲ့ အဖက် က မြန်ပေမဲ့ ကျနော်တို့ မသိမမှီတဲ့ ပြောင်းလဲမှုမျိုးကို ကြောက်တယ်။
ပန်းသီး၊ သံပုရာ၊ ပူစီနံ ရေစိမ်သောက်ကြည့်တာ
လေထိုးလေပွ ဗိုက်အောင့်လို့ တစ်ရက်နဲ့ ရပ်လိုက်ရတယ်…
၀ိတ်လျှော့ဘို့ရာ အဲ့လို ဇွဲရှိတာပါဆို…
အဲဒီ အကြောင်း နောက်ပို့(စ) မှ ရေးတော့မယ်။
ဟမလေး အာတီဒုံ့နည်းကလွဲလို့ တခုမှမလုပ်နိုင်လောက်ဖူးရယ် ကိုဗျဇီ
ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေရတဲ့သူတို့ ဆို မလွယ်ဘူးး
အာ့ကြောင့် ဟို အလွယ် ၃ နည်းကို ပဲ အားပေးတယ်…
ရေသောက် ဗိုက်မှောက်ရမယ့် နည်းကိုဒေါ့ စမ်းကျိအုံးမယ် ..
ဂနေ့ည ကစပြီး နက်ဖြန်ညထိ ..
ရေချည်းဘဲ လိမ့်ခွသောက်ကျိမယ် ….
ဒီဂျားထဲ တစ်ခုခု ဖြစ်လို့ဂဒေါ့ … မမဂျီး တာဝံဘဲ … ဟွန့် ..
လာတာနဲ့ နာ့ ကို တာဝန်ယူခိုင်းးးနေပြီ..
နိ က မသောက်မစားး အသီးးအရွက်ကြိုက်သမားးမို့ မမဂျီးးတို့လောက် မလိုအပ်ပါဘူးးး
အစားးး မစားးတိုင်းးးလည်းး အူဆေးးတာ မဟုတ်တာမို့
အစာအိမ် ကို ထိခိုက်နေပါအူးးမယ် ငါ့မောင်.. take care..
တကယ်ပိန်ချင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝ ၀ိတ်ချနည်း
တကယ်ပိန်ချင်သူများအတွက် ဆေးဝါးအကူမလိုဘဲ၊ မိမိဖာသာ အစားအသောက်ဖြင့် ၀ိတ်ချလို့ ရတဲ့ နည်းလမ်း ကောင်းရှိပါတယ်။ ဒီနည်းက ရက်သတတ္တ (၁)ပတ်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၆ မှ ၈ ကီလိုထိ ကျစေတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၄)ရက် နေ့ စွဲပါ American Health Digest မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
သို့ သော် (၇)ရက်တိတိ သူ့ အညွှန်းအတိုင်း လိုက်နာနိုင်မှသာ ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာလျော့ကျစေမှာဖြစ်လို့ ၊ တကယ်ပိန်ချင်လိုစိတ်ပြင်းပြ သူများ ကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်။
တသက်တာလုံးစားသောက်လာခဲ့သမျှ ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ပုန်းအောင်းနေတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်လို့ပထမနေ့ က အရေးကြီးဆုံးပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ရေဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ သစ်သီးဝလံများဖြစ်ကြတဲ့ ဖရဲသီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ သခွား မွှေး၊ ဂရိတ်ဖရု၊ နာနတ်၊ လိမ္မော်၊ စပျစ်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ပန်းသီး၊ တရုပ်ဇီးသီးကြီး စသည့် အဆင်ပြေရာ သစ်သီးတို့ ကို ဗိ်ုက် ဆာတဲ့အခါတိုင်း ထမင်းလွတ်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သောက်ရေကိုတော့ အနည်းဆုံး ဖန်ခွက် ၆-ခွက်မှ ၈-ခွက်အထိ သောက် ပေးပါ။ (ပထမနေ့ မှာ ဌက်ပျောသီး စားခွင့်မရှိပါဘူးရှင်)
ဒီနေ့ မှာတော့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း(ခေါ်)ဘရိုကိုလီ၊ မုန်လာဥနီ၊ ပဲသီးအမျိုးမျိုး၊ သခွားသီး၊ ဂေါ်ဖီထုပ် စတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အစိမ်းလိုက်(သို့ မဟုတ်)ပြုတ်၍(သို့ မဟုတ်)အပူပေးကာ ဟင်းချို/စွပ်ပြုတ်ဖြစ်ဖြစ် နှစ်သက်သလို စားနိုင်ပါတယ်။ သို့ သော် ဆီ (လုံးဝ) မထဲ့ပါနဲ့ ။ ဒုတိယရက်မှာ အာလူးကို ရှောင်နိုင်လေကောင်းလေးပါ။ အကယ်၍ အားလူးစားချင်စိတ်ရှိပါက ပြုတ်၍ နံက် စာအဖြစ်သာစားပါ။ (ပထမနေ့ အတိုင်း ရေသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ )
ဒီနေ့ အတွက် သစ်သီးဝလံ နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို တလှည့်စီစားလို့ ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အာလူးတော့ မစားပါနဲ့ ဦး။ နံက်စာ ကို သစ်သီးဝလံစားပါ။ နေ့ လည်စာကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားပါ။ ညနေပိုင်း အဆာပြေ သစ်သီးထပ်စားပြီးနောက်၊ ညစာကိုတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရော သစ်သီးဝလံများပါ ၂-မျိုးရောစားနိုင်ပါတယ်။ (ပထမနေ့ အတိုင်း ရေသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ )
ဒီနေ့ ကတော့ ပျော်စရာနေ့ လေးပါဘဲ။ တနေ့ တာလုံးအတွက် ဌက်ပျောဌက်ပျောသီး ၈-လုံးအထိစားလို့ ရပြီး၊ နွားနို့ ၃-ခွက် အထိ သောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ နံက်စာ၊ နေ့ လည်စာနဲ့ညစာတွေကို ဌက်ပျောသီး ၂-လုံးနဲ့ ၊ နွားနို့၁-ခွက် စီသောက်ပေးပါ။ ညနေစာကိုတော့ အဆာပြေ ဌက်ပျော်သီး ၂လုံးလောက်စားပေးနိုင်ပါတယ်။ (ပထမနေ့ အတိုင်း ရေသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ )
ဒီနေ့ မှာတော့ ခရမ်းချဉ်သီးမှည့်(အလုံးကြီးကြီး) ၁၀-လုံးနဲ့ထမင်း ပန်းကန်လုံးသေး ၁-ခွက် စားလို့ ရပါတယ်။ ထမင်း ပန်းကန် လုံးသေး ၁-ခွက်ကို နေ့ လည်စာအဖြစ် စားပြီး၊ နံက်/နေ့ လည်/ညစာတွေအတွက် ခရမ်းချဉ်သီး ၁၀-လုံးကို အဆင်ပြေသလို စား နိုင်ပါတယ်။ ပဉ္စမနေ့ က ရေတိုးသောက်ပေးရမယ့် နေ့ ဖြစ်လို့ယခင်သောက်ရေ ဖန်ခွက် ၈-ခွက်မှ ယခု ၁၂-ခွက်အထိ သောက် ပေးရပါမယ်။
ဒီနေ့ မှာလည်း နေ့ လည်စာကို ထမင်းပန်းကန်လုံးသေး ၁-ခွက် စားလို့ ရပါတယ်။ သို့ သော် သစ်သီးဝလံတို့ စားခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒုတိယနေ့ ကအတိုင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုတော့ အလုံအလောက်စားပေးနိုင်ပါတယ်။ (ပဉ္စမနေ့ ပမာဏအတိုင်း ရေများများ တိုးသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ )
(အားတင်းထားနော် နောက်နေ့ ကစလို့ ကိုယ်ကြိုက်တာ အစားစုံ စားလို့ ရပြီလေ) ပျော်စရာနေ့ ကြီးပါ။ ဒီနေ့ မှာတော့ ထမင်း ပန်းကန်လုံးသေး ၁-ခွက်စာ အပြင်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့သစ်သီးဝလံတွေပါ စားခွင့်ရှိပါတယ်။ မှန်ကြည့်လိုက်ပါဦး သင့် မျက်နှာအသားအရေပိုကောင်းလာပြီး ယခင်ကထက် ပိုမိုဝင်းပနေတာကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ကြည့်တဲ့အခါ မှာလည်း အနည်းဆုံး ၆-ကီလိုလောက် ကျသွားတာမို့ဒါဟာ သင့်ရဲ့မဆုတ်မနစ် ဇွဲရှိရှိဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှု ရလာဘ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Online ဆေးခန်း >>> http://goo.gl/Q9UpvQ
ပေါက်ပေါက် (Ref : American Health Digest )
-ထမင်းမစားဘဲ တစ်နေကုန် အသီးအနှံတွေ ထိုင်စားပီး ရုပ်ရှင် ဆယ်ကားလောက် ကျိနေရရင် ပိုကျိုက်အိ
ရုပ်ရှင်ကျိ ရင် အစားစားရမှ..
Credit to SK Herbal Myanmar
ကစော်ဖောက်ထားတဲ့ နာနတ်သီးဖျော်ရည်ကို ပျားရည်နဲ့ရောပြီး ကျွန်မတို့အဖွားတွေက ကျွန်မတို့အမေတွေကို ပုံမှန်စားစေခဲ့ဖူးတယ်။
ဒါဟာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး အလေးချိန် ထိန်းပေးတဲ့နေရာမှာလည်း ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တာကြောင့်ပါ။
ဒါ့အပြင် ပန်ကရိယရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း အားပေးပါသေးတယ်။
အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းတစ်လျောက်ကိုလည်း သန့်စင်ပေးပြီး အများသိကြတဲ့ အူဆေးခြင်းတာဝန်ကိုလည်း ထမ်းပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်တွင်း အဆိပ်အတောက်များကို ထုတ်ပေးပြီး ကင်ဆာဖြစ်နေခြေကိုလည်း လျော့ချပေးပါတယ်။ ဆဲလ်တွေမှ အာဟာရစုပ်ယူမှုကိုလည်း အားပေးပြီး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုလည်း ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သွေးကိုလည်း ထိန်းညှိပေးတာကြောင့် သွေးတိုးမှာ သွေးကျမှာကို လည်းပူနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုလက်စရော လယ်ဗယ်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပြီး အသားအရေအစိုဓာတ်ကိုလည်းဖြည့်ပေးတာကြောင့် ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုကိုပါပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။ ကော်လဂျင်ဓာတ်ကိုလည်းဖြည့်တင်းပေးတာကြောင့် အရေအကြောင်းများ အသားအရေ တွဲခြင်းများကိုပါ ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ သဘာဝကပေးတဲ့ ခုခံစွမ်းအားရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် မိမိရဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှု ပုံစံကြောင့် ဖျားနာခြင်းတို့ကို သဘာဝအတိုင်းတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ ခုခံစွမ်းအားဟာ အလိုလိုလျော့နည်းသွားပါတယ်။ ထိုသို့ ခုခံအားလျော့နည်းလာမှုကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်စွမ်းပေးပြီး ဖျားနာခြင်းများ အခြားရောဂါပိုးများကိုလည်း အလွယ်တကူ မကူးစက်နိုင်အောင်လည်း ကူညီပေးပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးထဲ သကြားပါဝင်မှုနှုန်းကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးသလို မလိုအပ်တဲ့ အဆီတွေကိုလည်း လျော့ချပေးဖို့ ကူညီပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အဖတ်ဖတ်က ကောင်းမွန်လှတဲ့ အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့နာနတ်ပျားဆေးရည် ဖော်စပ်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေ ၃၂ အောင်စ
နာနတ်သီး ၁၂ အောင်စ
ဂျင်း အတက် ၂ လက်မ
ပျားရည်စစ်စစ် ထမင်းစားဇွန်းအပြည့်နဲ့ တစ်ဇွန်း
ဂျင်းအတက်လေးကို ပါးပါးလေးတွေလှီးပေး နာနတ်သီးကို လက်မဝက်လောက်ကလေးတွေ စိတ်ပြီး ရေရယ် ပျားရည်ရယ် ပူတီနံရယ်ကို ရောပြီး သမသွားအောင် ပြင်းပြင်းလေး လှုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ထို့နောက် ၂ရက်လောက် ပုံမှန် အပူချိန်ရှိတဲ့ နေရောင်တိုက်ရိုက်မရတဲ့နေရာလေးမှာ သိပ်ထားပေးပါ။ ထို့နောက် သောက်သုံးနိုင်ပါပြီ။ အေးအေးလေး သောက်ချင်ပါက ရေခဲတုံးလေးတွေထည့်ပြီး သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီလ ဒီစာကိုထည့်မလို့အကြံထုတ်နေတယ်..။ စာနွဲ့နေဆိုင် (ပူတာအို)
ဖြစ်ပုံက.. ပြီးခဲ့တဲ့တပါတ်က.. သတင်းစာရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့. ဓာတ်ပုံပြပွဲသွားတာမှာ..
Cucumber Lemon Mint Detox Water ကိုလုပ်ပြီး အားလုံးသောက်နိုင်ဖို့.. စားပွဲပေါ်တင်ထားတာမို့.. စကားစပ်မိထားလို့ပါ..။
Detox Water တွေလိုက်ကြည့်တာ.. အောက်ကလင့်ခ်ကဟာကလည်း.. Top 8 တဲ့…။
ဒီ ည ပေးး လို့ ရလားးး
ကျုပ်ကတော့.. လဖက်ရည်..လဖက်မပါသမို့.. ဆာယိုနာရ..။
အခုတင်.. စိန့်ပြည်က.. လဖက်ညွှန့်ကို.. အလုံးအလုံးလေးတွေလုပ်ထားတဲ့..လဖက်ခြောက်ဝယ်လာပြီး.. ရေနွေးလောင်းထည့်ပြီးတာနဲ့.. ခဲထားတာ..။
အပေါ်ရေတင်းတာနဲ့.. သောက်နေတာ…။ အရသာရော..အနံ့ရောရှိပါပေ့…။
လက်ဖက်ခြောက်မှာ စိန့်ပြည်ကို ခုထိ မယှဉ်နိုင်ဘူးဗျ။
အဲဒီ လက်ဖက်ခြောက်က ဈေးကြီးပြီး အတော်သောက်လို့ကောင်းတယ်။
ရုံးက လက်ဆောင်က ခွဲတန်းနဲ့ဆို နည်းနည်းပဲ ရဖူးတယ်။
1) Apple Cinnamon Detox Water (as seen on Dr. Oz)
2)Cucumber Lemon Mint Detox Water (aka Sassy Water)
3) Jillian Michaels Detox Water
4) Strawberry Detox Water
5) Simple Detox Water
6) Apple Cider Vinegar Detox Water
7) Lemon and Cayenne Pepper Detox (Master Cleanse)
Credit to – အလှအပတွက်ရွေးချယ်စရာ Cosmetic Queen
၅ ရက် အတွင်း ၅ပေါင် မှ ၁၀ ပေါင်ထိ ကျစေနည်း
မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ပွဲလမ်းသဘင် သွားစရာရှိလို့ဖြစ်ဖြစ် ဝိတ်အမြန်ကျစေချင်ရင် သုံးတဲ့နည်းလေးပါ။ ခွဲစိတ်ရမယ့် အဝလွန် လူနာ တွေလည်းဒီနည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ နာမည်ကိုက hospital diet plan ပါ
ရှောက်ချိူသီးဆိုတာ sunkist သီးကိုပြောတာပါ. မရရင် လိမ္မော်သီး (သို့) ပန်းသီးအစားထိုးပါ
မနက်စာ….. ရှောက်ချိူသီးတလုံး နဲ့ ပေါင်မုန့်ခြောက်တချပ်
နေ့လည်စာ…. ကြက်ဥပြုတ် ၁လုံး, ရှောက်ချိူသီး ၁ လုံး ဒိန်ချဉ် ၂ ခွက် နဲ့ ပေါင်မုန့်ခြောက်၂ချပ်,
ညစာ…. ကြက်ဥပြုတ် ၂ လုံး, ခရမ်းချဉ်သီး၂ လုံး, ဒိန်ချဉ် ၁ခွက် နဲ့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို salad လုပ်စားပါ အရသာတွက် ရှာလကာရည်, သံလွင်ဆီနဲ့ ဆားအနည်းငယ်ကို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်…
မနက်စာ….. ရှောက်ချိုသီးတလုံး နဲ့ ပေါင်မုန့်ခြောက်တချပ်
နေ့လည်စာ….. ကြက်ဥပြုတ် ၁လုံး, ရှောက်ချိူသီး ၁ လုံး ဒိန်ချဉ် ၂ ခွက် နဲ့ ပေါင်မုန့်ခြောက်၂ချပ်,
ညစာ…… ရှောက်ချိူသီး ၁ လုံး, ခရမ်းချဉ်သီး ၁လုံး, ဒိန်ချဉ် ၁ခွက်, ပေါင်မုန့်ခြောက်တချပ် နဲ့ ကြက်သားရင်ပုံကို ပြုတ်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကင်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်စားနိုင်ပါတယ်
ညစာ…… ရှောက်ချိူသီး ၁ လုံး, ဒိန်ချဉ် ၁ခွက်, ပေါင်မုန့်ခြောက်တချပ် နဲ့ အမဲသား steak (သို့) ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသားတမျိူးမျိူးကို steak လုပ်စားနိုင်ပါတယ်…
နေ့လည်စာ….. ဒိန်ချဉ် ၂ ခွက်, သခွားသီးချဉ်ပတ်, ခရမ်းချဉ်သီး ၁လုံး နဲ့ ပေါင်မုန့်ခြောက်တချပ်
ညစာ…. ပန်းသီး၁ လုံး, ပေါင်မုန့်ခြောက်တချပ်, ခရမ်းချဉ်သီး၂ လုံး နဲ့ ကြက်သားရင်ပုံကို ပြုတ်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကင်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်စားနိုင်ပါတယ်…
နေ့လည်စာ….. ခရမ်းချဉ်သီး ၁ လုံး, ငါးကြော် ၁၂၅ g, ပေါင်မုန့်ခြောက်တချပ်
ညစာ….. ခရမ်းချဉ်သီး ၁ လုံး, ကြက်ဥပြုတ်၁လုံး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို salad လုပ်စားပါ အရသာတွက် ရှာလကာရည်, သံလွင်ဆီနဲ့ ဆားအနည်းငယ်ကို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်
စနေ နဲ့တနင်္ဂနွေ နေ့တွေမှာတော့ ကိုယ်ပုံမှန်စားနေကြတိုင်း စားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်တော့မများပါစေနဲ့ ဝိတ်ပြန်တက်လာနိုင်လို့ပါ…
ကဲ …!!! လှချင်တဲ့ ချစ်တို့ ကျေနပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
သဘောကျရင်ဖြင့် ဒီ ပို့စ်လေးကို share ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးစေလိုပါတယ်ရှင်